IziCwangciso zeSeli ze-Sprint-Nextel - Iselula Phone Plans
IziCwangciso zeSeli ze-Sprint-Nextel
Ngokujolisa ikakhulu kubasebenzisi abanzima, iiplani zeseli ezininzi zeSprint zibizwa ngegama elithi 'yonke into' ebandakanya konke, inikezela ngemizuzu ye-airtime, kunye nezinye izinto ezifunwa ngabasebenzisi beefowuni eziphathwayo. Ngoku ukuba i-Nextel idityaniswe ne-Sprint, inkampani yaziwa kakhulu ngegama lophawu lwamva. Imali yeCNN Iingxelo zokuba kukho izicwangciso zokuvala i-Nextel ngo-2013.
IziCwangciso zeSeli zeSprint ezizodwa
Izicwangciso zefowuni yabantu ngabanye ezivela kwi-Sprint zibonelela ngeendlela ezininzi ezingenamkhawulo, zikhulula abathengi ekubeni bajonge ukusetyenziswa kwabo yonke imihla okanye bajongane nemirhumo engaphezulu kweebhili kwiimali zabo zenyanga. Olu lwazi lubonelelwe kweli phepha yenzelwe ukubhekisa kuphela kwaye isekwe kumaxabiso apapashiweyo ngelixesha eli nqaku lalibhalwa ngoSeptemba ka-2012. Olona lwazi luhlaziyiweyo, jonga kumthengisi we-Sprint wasekuhlaleni.
intsingiselo yomthi wekrisimesi
Yonke nje into ($ 109.99) -Oku kusondele kwisicwangciso esingenamda njengoko uza kuyifumana nge-Sprint, ikunika imizuzu engenamda, umda omde wasekhaya, i-push-to-talk, imiyalezo engenamda kunye nedatha engenamda.
Yonke idatha ($ 79.99- $ 99.99) - Esi sicwangciso sifana kakhulu nesicwangciso se-Simply Everything, ngaphandle kwemizuzu ayinasiphelo. Isicwangciso se- $ 79.99 sinemizuzu engama-450 nanini na, ngelixa isicwangciso se- $ 99.99 sinemizuzu engama-900. Bobabini banobusuku obungenamkhawulo kunye nempelaveki ebiza ukuqala ngentsimbi yesi-7, kunye nomgama omde, ukuhambisa iselfowuni, ukuthumela imiyalezo kunye nedatha engenamda.
Yonke into yokuThumela imiyalezo ($ 49.99- $ 69.99) -Ukuqhubekeka usiya ezantsi kwisikali, esi sicwangciso sisusa idatha engenamda, kodwa sigcina yonke enye into ihambelana nezicwangciso zeDatha yonke into. Ukhetho lwe- $ 49.99 lunemizuzu engama-450, ngelixa ukhetho lwama- $ 69.99 lunemizuzu engama-900. Zombini zibandakanya ukuhlwa okungenamda kunye neempelaveki kunye nemiyalezo engenamda.
Thetha ($ 39.99- $ 59.99) -Kubantu abadinga ilizwi kuphela, ezi zicwangciso zesiseko se-Sprint-Nextel ziselunge ngakumbi. Zombini zibandakanya ubusuku neempelaveki eziqala nge-7 pm, kodwa isicwangciso se- $ 39.99 sinemizuzu engama-450, ngelixa icebo le- $ 59.99 linemizuzu engama-900.
Isiseko ($ 29.99) Elona cebo lifikelelekayo lelona lisisiseko kunye nemizuzu engama-200, kunye nokuhlwa kunye neempelaveki eziqala ngentsimbi yasebusuku .. Umgama omde wasekhaya ubandakanyiwe.
Imifanekiso esimahla yeSelfowuni
Ixesha leFowuni ephathekayo
IziCwangciso zoSapho zeSprint
Ukuba unabantu abaninzi kwikhaya elinye, ngamanye amaxesha ungonga imali ngokusayinela isicwangciso seselfowuni endaweni yezicwangciso zomntu ngamnye. Oku kukuvumela ukuba wabelane ngebhakethi elifanayo lemizuzu kunye neempawu kuwo wonke umntu kwiakhawunti efanayo.
Zonke izicwangciso zosapho zibandakanya imigca emibini yokuqala emva koko kukho intlawulo eyahlukileyo eyongezelelweyo kumgca ngamnye ongezelelweyo emva koko. Izicwangciso zosapho azinakuba ngaphezulu kwemigca emihlanu kunye neempawu zazo ngokusondeleyo kwisipili sezicwangciso ezihambelanayo.
luhlobo luni lofudo olu
Yonke nje into yosapho ($ 209.98) -Ngakunye nayo yonke into ecwangcisiweyo, le nguqulo yesicwangciso sosapho ibonelela ngento engenamda. Oku kubandakanya imizuzu engasikelwanga mda, umda wokuhamba-ukuya kwiselfowuni, i-push-to-talk, imiyalezo engenamda kunye nedatha engenamda. Imigca eyongezelelweyo yi- $ 99.99 inye.
Yonke into eyiDatha yoSapho ($ 149.99- $ 189.99) Isicwangciso se- $ 149.99 sibandakanya imizuzu eyi-1500, ngelixa icebo le- $ 189.99 libandakanya imizuzu engama-3000. Zombini zibonelela ngomgama omde ongenamkhawulo, ukuzula, ukuhambisa iselfowuni, ukuthumela imiyalezo kunye nedatha, kunye nobusuku kunye neempelaveki ukuqala ngentsimbi yesi-7. Imigca eyongezelelweyo yi- $ 29.99 inye.
Yonke into yokuThumela iMiyalezo ngoSapho ($ 99.99-149.99) - Ezi zicwangciso zisusa idatha engenamda, kodwa gcina ngokuhlwa nangeempelaveki ukuqala ngentsimbi yesi-7, kunye nemiyalezo engenamda. Isicwangciso se- $ 99.99 kunye nesicwangciso se- $ 149.99 sinemizuzu eli-1500 nangaliphi na ixesha kunye nemizuzu engama-3000 nangaliphi na ixesha, ngokulandelelana. Imigca eyongezelelweyo $ 9.99 inye.
Thetha ngentsapho ($ 69.99) -Isicwangciso sosapho esinexabiso eliphantsi asibandakanyi imiyalezo okanye idatha, kodwa ibandakanya i-700 nangaliphi na ixesha lemizuzu, kunye nokuhlwa kunye nempelaveki ukubiza emva kwentsimbi yesi-7. Imigca eyongezelelweyo zii-9.99 zeedola inye.
Thenga ujikeleze eyonaNtengiso ibalaseleyo
Ngelixa eyona ndlela ilula iya kuba kukuthatha ezi zicwangciso ngexabiso lobuso, ayisiyiyo indlela oza kufumana esona sivumelwano. Qiniseka ukuba uyothenga ujikeleze nabanye abathwali kwindawo yakho ukuthelekisa izicwangciso zeeselfowuni. Kananjalo, ngelixa uneempawu 'ezingenamda' zinokuvakala zinomtsalane, kusenokungafuneki ukuba ube nedatha engenamda okanye imizuzu engenamda. Gcina iliso elibukhali kwiipateni zakho zokusetyenziswa kwaye unokugcina imali ethile ethubeni.
Umntu Otya Imifuno Ukutya Zonke Umtshato Wokuziphatha Iivintage Collectibles Umdala Life
uyikhupha njani isosi yetumato
Intombazana ehloniphekileyo yentetho kudade omdala
indlela yokubala inzala kwimali mboleko yemoto ngesandla
Iindawo ezinqabileyo zokuhlala emantla ecalifornia
imidlalo yokudlala kwiikhompyuter zesikolo
indlela yokucoca indawo yeziko lezitena
Yintoni oza kuyinika isidanga sasekholejini
Ubuhlanga Ulusu Care